60 UMARKO OMNYAMA WETATTOO UYILO LWAMADODA-IIMBONO ZOKUTYA NGOKUTYA - UHLOBO
60 UMarko oMnyama weTattoo Uyilo lwaMadoda-Iimbono zokutya ngokutya
Yenza ulwaphulo-mthetho olumnyama, phosa esinye seziqalekiso ezintathu ezingenakuthethelelwa, ukugquma morsmordre, kwaye uphawu olumnyama luza kubonakala luzokwazisa umhlaba ngento oyenzileyo.
Wonke umntu odla ngokufa kukaVoldemort uphethe uphawu olumnyama kwenye indawo emzimbeni wabo, kutheni kungenjalo?
I-tattoo kaMarko oMnyama iya kwenza ilizwe lazi ukuba ucinga ukuba kumnandi ukwenza izinto ezimbi. Isimboli senyoka ephuma emlonyeni wokakayi yintsimbi enzima kwaye iya kukudibanisa nabanye abatya izidlo kwihlabathi liphela.
Uphawu lwaqala ukubonakala kuHarry noRon ekuqaleni kweGoblet yoMlilo emva kokuba uBarty Crouch Jr. ebambe ezinye izidli zokuBhubha zizonwabisa ngezinto ezingalindelekanga. Ngelo xesha, wakwenza oko ukoyikisa abalandeli bakaVoldemort bangaphambili ukuba bacinge ukuba Lowo Ongamele Ukubizwa Ngayo ngokwakhe ubuyile. Ngenxa yokuba bayingcatsha inkosi yabo yangaphambili, babaleka, kodwa hayi ngaphambi kokuba sonke isihlwele sichithwe kwisiphithiphithi esothukileyo. Babengazi ukuba inkosi yabo iya kuthatha inyama negazi ngaphambi kokuphela kwesemester yesibini.
Abantu abathwala uMarko oMnyama bayazi ukuba imbeko kunye neekhowudi zokuziphatha zizinto nje zobuxoki ezenziwa ngabo basemagunyeni okulawula inyambalala. Abangenisi kula maxabiso abubuxoki kunokuba bengenise kumaziko okanye kwiingcinga ezingalunganga zokulungileyo nokubi. Kweli hlabathi, kuphela buthathaka kunye namandla. Thatha uMarko oMnyama ngokwakho kwaye ilizwe malazi ukuba leliphi icala olikhethileyo.
1. Ingalo yangaphambili Iimpawu ezimnyama zeTattoos
Izimvo ezimnyama kunye nezimvu ezingwevu
2. Isandla esiMnyama seMark Tattoos
3. Inkomo Iimpawu zoMnyama eziMnyama
4. Intamo UMarko oMnyama weTattoos
5. Ukhakhayi Uphawu loMnyama lweeTattoos
6. I-Watercolor Iimpawu eziMnyama zoMarko
7. Ingalo Iimpawu eziMnyama eziMnyama
8. Sleeve Iimpawu ezimnyama zeTattoos
9. Ingakumbi Iimpawu eziMnyama zeTattoo
iinwele eziphakathi ukuya ezinde
Ingalo yangaphambi kweetattoos zabafana
Umnyama kunye nomhlophe ipeacock tattoo
imibuzo emnandi yokubuza intombazana
Indoda endala ye tattoo yasentabeni
iimpahla ezineebhutsi zamadoda
Ezona thermals zilungileyo kwimozulu ebandayo